I-Apple isungule i-HomePod mini kwamanye amazwe kulo nyaka | Ndisuka mac
I-Apple isungule i-HomePod mini kwamanye amazwe kulo nyaka
Sele siyazi ukuba inkwenkwezi ayisiyiyo iPodPod mini namhlanje. Zonke zizinto ezinqabileyo ezisungulwe kwi-WWDC yalo nyaka wama-21. Ngendlela i-WWDC isuswe ngayo ukuba sicingisise ngayo ngokungagungqiyo okanye ngokungathandekiyo. Ubuncinci bendilindele ngaphezulu kwaye i-iOS ibonakale ihlaziyiwe kwaye inemisebenzi emitsha ebilindelwe, kodwa iphoxekile IMacOS Monterey iqhubeka kakhulu. Kodwa ke, ukuya kuthi ga kwinqanaba. Im MiniPod mini nazo ziindaba kuba iya kuthengiswa kumazwe angaphezulu nangakumbi ukuba kunokwenzeka.
Ndicinga ukuba iApple inenjongo ecacileyo yokunika i-HomePod mini amathuba amaninzi. Ukuhamba ngamarhe amiselweyo kunye ne-Apple TV, okanye ukuba nekhamera yayo, ukuba ngukumkani wezithethi xa i-HomePod yoqobo inyamalala kuloo ndawo. Ngendlela, awungekhe uyithenge kwaApple nangona usenokuyifumana kubathengisi kwaye iivenkile ezikhethekileyo ngokuthe kratya.
Inyani yile yokuba iApple ayifuni ukuba kwenzeke okufanayo kwimini. Kungenxa yoko le nto eye wacinga ukuba yeyiphi indlela ebhetele kunokunika ioksijini engaphezulu kune ukuyibeka kwintengiso apho ingekafiki khona. Inkampani yaseMelika yandisa indawo apho ungathenga khona le modeli.
U-Apple ubhengeze ukuba i-HomePod mini izakufumaneka ukuze ithengwe kumazwe nakwimimandla kamva kulo nyaka, kubandakanya I-Austria, i-Ireland, i-Itali kunye neNew Zealand. U-Siri uya kuxhasa iilwimi zamazwe ahlukeneyo aza kuqaliswa kuwo i-HomePod mini, evumela abasebenzisi ukuba babuze uSiri ukuba badlale ingoma, bathumele umyalezo, bafumane iindaba, balawule izixhobo ezifanelekileyo zasekhaya ngeKhayaKit, kunye nokunye. USiri ohlaziyiweyo njengoko sibonile kwiWWDC
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple isungule i-HomePod mini kwamanye amazwe kulo nyaka
ICloud + Ukudluliswa kwangasese akuyi kubakho kwamanye amazwe
Ezi ziiMacs eziza kuxhasa iMacOS Monterey